Maxkamada Darajada 1aad ee Gobolka Bari oo Xukun ku riday Jariiflayaal la soo qabtay – SBC
Maxkamada Darajada 1aad ee Gobolka Bari oo Xukun ku riday Jariiflayaal la soo qabtay
Posted by Webmaster on May 19, 2013 Comments
Gudaha jeelka magaalada Boosaaso xaruta gobolka Bari waxaa maanta lagu maxmadadeeyay kooxo dhowaan lagu soo qabtay iyagoo jariif ku haya Bada Puntland oo ah ajaaniib u dhalatay dalka Iiraan iyo Soomaali kale oo iyagu ilaalo u ahaa.
Dhageysiga kiiskan iyo eedeymaha loo soo jeediyay kooxdan ayaa dhameystirkiisa loo balamay todobaadkii hore maanta waxaana maxkamadu laga dooday eedaha loo heystay oo isugu jiray kuwo ay ku soo oogeen dad kaluumeysato ah iyo jariifla lagu soo qabtay.
Waxaa maxkamada ka hor hadlay dad iyagu u heystay dembiyo Jariiflayaashan ajaaniibta ah waxayna sheegeen in ay horay ugu geysteen dembiyo la xiriira leynta kaluumeysato ay wax wadaageen iyo bur burinta qalabkii ay ku shaqeysanayeen.
5 Naaquuude oo ka mid ahaa Iiraaniyiinta Maxkamada la saarayay ayaa iyaguna maxkamada ka hadlay waxayna gaashaanka u daruureen eeda dilka iyo bur burinta ah ee lagu soo eedeeyay,
Waxayna Maxkamada horteed dhaar ugu mareen dadkii ugaga shakisanaa dilka dadkooda, iyagoona u sheegay in ay beri ka yihin dilka ay dadkani sheegayaan in ay iyagu geysteen.
Waxaa loo soo laabtay sharciga xukun ee dowlada Puntland ku rideyso kooxdan Iiraaniyiinta ah maadaama la soo qabtay iyagoo si sharci daro ah uga jariifaya qeyraadka Badda Puntland.
balse ka hor inta aan lagu dhawaaqin xukunka ay muteysteen iiraaniyiintan waxaa la dhageystay qareenka u doodayay kooxda Soomaalida ah ee lala soo qabtay Iiraaniyiintan, waxaanu qareenku ku dooday in daruuf ay u geysay wiilasha Soomaalida ah aysana ogaan kareynin xiligii ay howshasi qabanayeen in doonida ay saaran yihiin aysan heysan shatiga ogolaanshaha ka kaluumeysiga bada iyo in kale, waxaana uu ka codsaday maxkamada in ay garowsato una celiso hantidoodii.
Gudoomiyaha Maxkamada Sheekh Aadan Axmed ayaa ka dib ku dhawaaqay xukunka ay muteysteen Doonyaha Kaluumeysi, Ragii Ajaaniibta ahaa ee lagu soo qabtay iyo weliba kooxda Soomaalida ah ee ilaalada ka hayay.
Waxa uu ugu dhawaaqay xukunkaasi gudoomiyuhu sidan,
Doonyaha kaluumeysi oo ilaaa 5 doon ah midiiba 100,000 $ (Boqorkun oo doolar) waxaana loo qabtay in ay ku bixiyaan 45 cisho, hadii ay ku bixinwaayaanna ay dowladu la wareegi doonto.
Iiraaniyiintii watay gaar ahaan Naaquudayaashii lagu soo qabtay oo 5 nin ah midkiiba 5,000 $ (Shankun oo doolar) hadii ay 45 cisho ku bixinwaayaanna xabsi ayaa loogu bedelayaa
Baxridii ama shaqaalihii kale ee doonayahaasi oo iyagu kor u dhaafaya 70 waxaa midkiiba lagu xukumay 2,000 $ (Labakun oo doolar) sidaasi si la mid ah.
Kooxda Soomaalida ah oo dhan 12 nin waxay maxkamadu ku xukuntay ninkiiba 1000 $ (Halkun oo doolar) hadiisa ay bixin waayan waxaa loogu bedelayaa xabsi mudo 45 cisho gudahod.
Sidoo kale Maxkamadu waxay Xukuntay Kaluunka Saaran doonyaha la soo qabtay iyo Hubka ay wateen Soomaalida, waxaana lagu xukumay in dhamaantood ay la wareegto Dowlada Puntland.
Waxay noqoneysaa markii ugu horeysay oo Xukun maxkamadeed lagu qaado kooxo Jariiflayaal ah oo ciidamada badda Puntland ay soo qabteen iyagoo ku guda jira Jariif sharci daro ah.